Mata oo rajeeyay in Messi aysan noqon maalintiisa kulanka ay kaga hor imaan doonaan tartanka Champions League – Gool FM
(Europe) 19 Maarso 2018. Xidiga khadka dhexe ee kooxda Manchester United ee Juan Mata ayaa sheegay in Red Devils-ka ay sameyn doonto wax walba kulanka ay Barcelona kula ciyaari doonaan wareega siddeeda ee tartanka Champions League.
Hadalka Juan Mata ayaa wuxuu imaanayaa kadib wareysi dhinacyo badan taabanaya uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Manchester United, isagoo si gaar ah u amaanay qaab ciyaareedka cajiibka ah uu Lionel Messi ka sameeyay kulanka ugu dambeeyay ay la ciyaareen Real Betis.
Xidiga reer Spain ayaana rajeeyay in kabtanka kooxda Barcelona uusan bixinin qaab ciyaareed la mid ah, kulanka soo aadan uu kaga hor imaan doono kooxda Manchester United tartanka Champions League.
“Waa tartan weyn ee aad u adag, laakiin waxaa nahay Manchester United waan la qabsanay inaan ka hor tagno dhibaatooyinkan oo kale”.
“Kulanka Barcelona waa inaan sameynaa wax walba ee awoodeenu gaarsiisan tahay, sababtoo ah waa kooxda ugu fiican aduunka”.
“Waxaan ognahay inaan sameyn doonno dadaal laba-geesood ah si aan kaga guuleysano Barcelona, waxaan diyaar u nahay inaan dadaal kasta ku bixino sida aan ugu gudbi lahayn wareega xiga ee tartankan”.
“Barcelona waxay ku guuleysatay 4-1 kulankii Real Betis, sababa la xiriira dadaalka dheeriga ah uu bixiyay Messi, wuxuu dhaliyay saddexleey, waxaa xitaa u sacabtumay taageerayaasha kooxda kale”.
“Waxaan rajeenayaa in kulanka aanu wada ciyaari doono kooxda Barcelona aysan noqonin maalinta Lionel Messi”.